ifufe anyanwụ ngwakọ usoro n'ihi na n'ụlọ na azụmahịa - Ningbo Haitian Holding Group Co., Ltd
email Nkwado sales@htwindsolarpower.com
Wind Solar ngwakọ System
Industrial ifufe tobaim 10kw-50kw mmepụta
Micro ifufe tobaim 100-1000W mmepụta
Residential ifufe tobaim 1kw- 5kw mmepụta
PV okporo kegide inverter
PV nkwụsị igbe
anyanwụ chaja njikwa
Wind okporo on njikwa
Wind okporo tie inverter
Wind Solar ngwakọ chaja njikwa
Wind anyanwụ ngwakọ okporo tie inverter
PV arịọnụ System
Mpempe akwụkwọ Metal ụlọ Ugwu
Ngidi ụlọ Ugwu
Wind arịọnụ System
Ịkpakọba menjuobi elu
Free-eguzo ụlọ elu
Guyed Waya elu
ifufe anyanwụ ngwakọ usoro n'ihi na n'ụlọ na azụmahịa
Dị ka ọtụtụ ndị ogbara ohuru ọkachamara, a obere "ngwakọ" electric usoro na-agwakọta ifufe na anyanwụ (photovoltaic) teknụzụ awade ọtụtụ uru n'elu ma otu system.In ukwuu nke ebe, ifufe gbapụrụ ọsọ ndị dị ala na okpomọkụ mgbe anyanwụ na-awa-egbuke egbuke ma fọdụrụ n'ezinụlọ. Ifufe dị ike na oyi mgbe obere ìhè anyanwụ dị. N'ihi na elu na-arụ ọrụ ugboro maka ifufe na anyanwụ na usoro ime n'oge dị iche iche nke ụbọchị na afọ, ngwakọ usoro na-yikarịrị ka na-emepụta ike mgbe ị kwesịrị ya.
1. PV Hazienụ: A ọnụ ọgụgụ nke PV ogwe ejikọrọ na usoro na / ma ọ bụ ihe yiri na-enye a DC mmepụta nke mere irradiance. Nghazi na tilt ndị a ogwe dị mkpa imewe kwa, dị ka nke ọma dị ka shading si gburugburu obstructions.
2. Wind tobaim: Nke a na-arụnyere na n'elu nke a toro ogologo ụlọ elu, na-anakọta kinetic ike ifufe na-atọghata ya ka ọkụ eletrik na bụ dakọtara na a home si eletriki usoro.
3. ngwakọ njikwa: ịchịkwa batrị akụ ụgwọ na ihapu ezi uche na nchekwa.
4. Battery akụ: nwere ike ịbụ na otu batrị ma ọ bụ multiple batrị ejikọrọ ọnụ ike nnoo otu nnukwu batrị nke chọrọ voltaji na nkwupụta ụda-hour ikike. N'ụzọ ụfọdụ batrị nhazi na ikike ndị kasị mkpa eletriki ike mkpebi mee, na a nhọrọ amamihe nwere ike inyere-ekwe nkwa a otu ebe ọkọnọ nke eletriki ike nakwa dị ka a usoro na dị mfe iji rụọ ọrụ ma na-enwe.
5. Inverter: A ike Ntụgharị na ° inverts ± na DC ike si ogwe n'ime AC ike.
6. ibu: Akwụrụ maka netwọk ejikọrọ ngwa na ụlọ na na-nri si inverter (AC ibu), ma ọ bụ site na batrị akụ (DC ibu).
Professionally imewe na Nlụpụta Na Pv Solar Energy & Wind-Solar ngwakọ System.